Shirkii Golaha Degaanada Qaranka oo sii socda iyadoo hoobiyayaal lagu weeraray - Sabahionline.com
Shirkii Golaha Degaanada Qaranka oo sii socda iyadoo hoobiyayaal lagu weeraray Luulyo 29, 2012
Shirkii Golaha Degaannada Qaranka ayaa dib u biloowday Sabtidii (28-kii July) kadib markii uu hakad galay Jimcihii, sidaana waxa wariyay Garowe Online.
Sarkaal Midowga Afrika ah oo boorriyey horumarka siyaasadda Soomaaliya
"Dhamaystirka codbixinta dastuurka ayaa ah caqabadda nagu taagan ee aan isku dayayno in aan ka gudubno, waana tallaabo muhiim ah oo aan dib u dhici karin," ayuu Sabtidii yiri Wasiirka Dastuurka iyo Dib-u-heshiisiinta Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil. Waxa uu sheegay in kulankii Jimcihii dib loogu dhigay hal maalin sababo farsamo aawadood.
Dhismihii hore ee dugsiga bilayaksa ee lagu qabanayo shirka Golaha Degaannada Qaranka ayaa la xiray Jimcihii, kadib markii dhowr hoobiye ay ku qarxeen mele u dhow. Cidina kuma ayan dhaawacmin qaraxyadaa.
Goalha Degaannada Qaranka oo loo xilsaaray ansixinta dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya, ayaa Arbacadii ka furmay Muqdisho kadib dib-u-dhacyo dhowr ah.. Waxa kor loo qaaday ammaanka caasimadda si looga hortago weerarro ka yimaada al-Shabaab, oo iyadu ku hanjabtay in ay bar-tilmaameedsan doonto xubanaha Golaha Degaannada Qaranka.